Chelsea vs Arsenal: Goorma ayaa la ciyaarayaa Final-ka Europa League, halkee ayaase lagu ciyaarayaa?? – Gool FM
Chelsea vs Arsenal: Goorma ayaa la ciyaarayaa Final-ka Europa League, halkee ayaase lagu ciyaarayaa??
(Yurub) 10 Maajo 2019. Arsenal ayaa wajihi doonta Chelsea final-ka tartanka Europa League kaddib markii labadaan kooxood ee ka wada dhisan Magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ay xalay xaqiijiyeen inay gaareen kama dambeysta tartankan.
Maalin kaddib markii Tottenham ay xaqiijisay inay Final-ka Champions League la ciyaari doonto Liverpool ayaa haddana Arsenal waxa ay dhankeeda xaqiijisay inay gaartay final-ka tartanka Europa League kaddib markii ay Spain kaga soo adkaadeen kooxda Valencia, halka Chelsea ay rigooreyaal 4-3 ah kaga badisay naadiga Eintracht Frankfurt.
Waa markii ugu horreysay taariikhda oo afar kooxood oo isku waddan ah ay isugu soo haraan labada final ee Champions League iyo Europa League guud ahaan kooxaha isku wajahaya kama dambeysta labadaan tartan ayaana ka socda ama ka wada dhisan dalka Ingiriiska.
Haddaba halka ka aqriso xog ku aaddan Final-ka Europa League:-
Goorma ayaa la ciyaarayaa Final-ka Europa League?
Waxaa la ciyaari doonaa 29-ka bishan aynu ku jirno ee May 2019 oo ku beegan maalin Arbaco ah.
Halkee lagu ciyaarayaa?
Waxaa lagu ciyaari doonaa Magaalada Baku ee caasimadda Waddanka Azerbaijan, waxaana lagu dheeli doonaa garoonka Baku Olympic Stadium.
Garoonkan Baku Olympic ayaa la dhammaystiray bishii Febraayo sanadkii 2015-kii, waxaana fariisan karta in ku dhow 70,000 oo ruux, waana markii ugu horreysay ee loo isticmaalayo in lagu ciyaaro tartammada Yurub ee xagaaga sanadkan.
Waxa uu sidoo kale garoonkan marti geli doonaa ciyaaraya qarammada Yurub ee UEFA EURO 2020.
Garoonkan waxaa kale oo iska leh oo si joogto ah u isticmaala xulka qaranka Azerbaijan.
Alexis Sanchez oo dib ugu laabanaya xagaagan dalka Talyaaniga & Kooxda uu ku biiri doono oo daaha laga rogay
SAWIRRO XUL AH: Manchester United oo qabsatay xafladeeda Sanadlaha.....(Yaa loo caleemo saaray Laacibka Sanadka?)